बालबालिका ‘सप्लाइ’ बाजुरादेखि काठमाडौँसम्म - समसामयिक - नेपाल
स्थानीय तह चुनाव, ०७४ असारमा बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा एउटा फरक विषय पनि बहसमा थियो । गाउँपालिकाका थुप्रै बालबालिकालाई सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्ला र केहीलाई काठमाडौँ ल्याएर घरेलु नोकर बनाइएको विषय चुनावमा उठेको थियो । चुनावपछि वडा ४ र ५ का अध्यक्षसहित प्रमुख, उप–प्रमुखले गाउँपालिकाका बालबालिका कहाँ–कहाँ छन् भनेर खोजीनीति गरे ।
वडा ४ र ५ का अध्यक्षहरूले तत्कालै आ–आफ्ना वडाको विवरण संकलन गरेर गाउँपालिकामा बुझाए, अरूले बुझाउने क्रम जारी छ । ०७४ मंसिरसम्मको विवरण संकलन गरेर ‘गौमूल गाउँपालिकाबाट घरेलु कामदारका रूपमा जिल्लाबाहिर गएका बालबालिकाको विवरण’ तयार भएको छ । त्यस प्रतिवेदनले बालबालिकाको नाम, उमेर, ठेगाना, लगिएको घर, घरमूलीको नाम, ठेगाना र लैजान सहयोग गर्ने बिचौलियाको नामसमेत खुलासा गरेको छ ।
१० वर्षीया सीमा रोकाया यस्तै घरेलु श्रमिकमध्येकी एक हुन् । उनलाई बिचौलियाले काठमाडौँ ल्याइपुर्‍याएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी रामकुमार थापाको बाँसबारीस्थित घरमा घरेलु कामदार रहेकी गौमूल गाउँपालिका–४ की सीमासँग गरिएको टेलिफोन कुराकानी :
सीमा : म पनि सञ्चै छु
सीमा : यसै बसि’रा
पत्रकार : तिमी कुन स्कुल पढ्छौ ?
सीमा : ४ कक्षामा
पत्रकार : अनि तिमीले कुन–कुन काम गछ्र्यौ घरमा ?
सीमा : लुगा पट्याउने, मिलाउने, गमलामा पानी हाल्ने
पत्रकार : एउटा कुरा सोध्छु, नढाँटी भन है ?
पत्रकार : कहिलेकाहीँ घरका मान्छेले गाली गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
सीमा : कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ, काम गर्ने गर, नभूल भनेर । कहिलेकाहीँ नसक्ने काम पनि गर्दिन्छु ।
पत्रकार : कुन–कुन काम गर्छौ, फेरि भन त ?
सीमा : म कौसी/छत सफा गर्छु, बिरुवामा पानी हाल्छु, किचनमा कुचो लगाइदिन्छु, रातीको भाँडा माझ्छु, घरमा कुचो लगाइएर पुछिदिन्छु, ब्रस लगाइदिन्छु, कुसन मिलाउँछु, सोफा मिलाउँछु, लुगा पट्याइदिन्छु, उठाइदिन्छु ।
०७२ वैशाखमा आठ वर्षकी सीमालाई उनकै मामा गौमूल–४ का भरत धामीले ‘राम्रो ठाउँमा लगेर पढाइदिने’ भन्दै काठमाडौँ ल्याएका थिए । त्यसबेला भरतले सीमाकी दिदी १२ वर्षीया कमलालाई पनि सँगै काठमाडौँ लिएर आएका थिए । काठमाडौँ ल्याएर भरतले सीमा र कमलालाई यामाहाका व्यवस्थापक किरण गौतमको धोबीचौरस्थित घरमा लगेर छाडिदिए । सीमा र कमला त्यस दिनदेखि किरणको घरमा घरेलु कामदार भए । पछि किरणले सीमालाई बहिनीज्वाइँ रामकुमार थापाको बाँसबारीस्थित घर पठाइदिए । “अहिले दिदी धोबीचौर, म बाँसबारीमा छु,” सीमाले भनिन्, “दिदी र म दुवैले उस्तै–उस्तै काम गर्ने हो ।”
भरतले पढाइदिने भन्दै लगेको दिनदेखि छोरीहरू कसको घरमा छन् भन्ने अभिभावकलाई समेत जानकारी छैन । बाबु भक्त रोकाया भन्छन्, “म काम गर्न भारत गएका बेला छोरीहरू लगेछन्, बेला–बेला फोनमा कुरा हुन्छ । उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन्, मलाई थाहा छैन ।”
आफ्नो गाउँ–ठाउँका कलिला बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा ‘सप्लाइ’ गर्ने भरत अहिले कतार पुगेका छन् । उनले गौमूल–४ कै १२ वर्षीया शर्मिला धामी र कविता धामीलाई पनि हुने–खानेको घरमा राखेर पढाइदिने भन्दै नेपालगन्ज पठाएका छन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकालाई सहरका राम्रा स्कुलमा पढाइदिने आश्वासन दिएर घरेलु कामदार बनाउने भरतजस्ता थुप्रै व्यक्ति बाजुरामा अहिले पनि सक्रिय छन् । गाउँपालिकाको विवरण अनुसार विपन्न अभिभावकलाई प्रलोभनमा पारेर बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा सप्लाइ गर्नेमा धेरैजसो शिक्षक र व्यापारी पनि छन्, यिनीहरूले सहरका ‘हुनेखाने’लाई बालबालिका मिलाइदिएर अपराध कर्म गरेका छन् ।
सामाजिक प्रभाव हुने शिक्षक र व्यापारीबाहेक परिवारलाई सहमत गराएर कुरा मिलाउने बिचौलियामा बालबालिकाकै नातेदार पनि छन् । घरेलु नोकरको खोजीमा रहेका व्यक्तिलाई भनेजस्तो बालबालिका उपलब्ध गराएमा ‘लाभ’ लिन सकिने आशमा बिचौलियाले यस्तो काम गर्छन् । आर्थिक अवस्था नाजुक भएका स्थानीयले त्यस्ता बिचौलियाको विश्वासमा सन्तान सहर पठाउन राजी हुन्छन् । अनि, ती कलिला बालबालिकाको श्रम शोषण सुरु हुन्छ ।
गाउँका बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमा पढाइदिने आश देखाएर साहूसँग ‘सेटिङ’ मिलाउनेमध्येका एक हुन्, गौमूल–४ का रमानन्द जोशी । उनी कृतिचौर माविका पूर्वप्रधानाध्यापक पनि हुन् । गाउँमा बुद्धिजीवी भनेर चिनिने ‘रमानन्द गुरु’ले गौमूल–४ का पाँच बालबालिकालाई विभिन्न व्यक्तिका घरमा पुर्‍याउन सहयोग गरेका छन् । संकलित विवरणमा उनको नाम छ । गौमूल–५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र रोकायाले हाकाहाकी भने, “बालबालिका बेच्नेमा रमानन्द गुरु अगाडि देखिए ।”
गाउँपालिकाको विवरण हेर्दा रमानन्दले कञ्चनपुर र कैलालीमा धेरै बालबालिका ‘सप्लाइ’ गरेको देखिन्छ । उनले पठाइदिएका बालबालिका प्राय:जसो शिक्षकका घरमा काम गर्छन् । रमानन्दले अत्तरियाका दुर्गा भवानी माविका शिक्षक रेश्मी शाह, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर माविका शिक्षक चन्द्रकला पन्त, कञ्चनपुरकै शान्ति निकेतन माविका शिक्षक पुष्कल भट्टकहाँ एक–एक बालक पठाइदिएको अभिलेखले देखाउँछ ।
बाजुरा बूढीगंगा नगरपालिका, बड्यालीस्थित शारदा निमाविका शिक्षक गणेश शाह, गौमूलस्थित दुर्गाली प्राविका शिक्षक बलराम जोशी, गौमूलकै मानाकोट माविका शिक्षक भीमबहादुर रोकाया, कैलालीको धनगढीस्थित शारदा माविकी शिक्षक शान्ति सिंहले पनि बालबालिका मिलाइदिने काम गरेको गाउँपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । जस्तो कि, गणेशले पठाइदिएका बालक उमेश धामी दाङको सरस्वती माविका शिक्षक वसुन्ता हमालकहाँ काम गर्छन् ।
गौमूल गाउँपालिका–५ का केशव रोकाया गाउँमा ‘बुद्धिजीवी’ भनेर चिनिन्छन् । उनले पनि गौमूलका पाँच बालबालिकालाई घरेलु कामदारका लागि अन्यत्र पठाइदिएका छन् । उनले पठाएका बालबालिका अहिले काठमाडौँ, बाँके, पोखरालगायतका ठाउँमा घरेलु कामदार रहेको गाउँपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस क्षेत्रमा बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा लैजाने पुरानै चलन हो । किनभने, अहिले बालबालिका सप्लायरका नामले चिनिने गौमूल–५ का भविन्द्र रोकाया केही वर्ष पहिलेसम्म आपैँm घरेलु कामदार थिए । दुई वर्षअघि उनी भक्तपुरका एक शिक्षक रुद्र खड्काको घरमा काम गर्थे । भविन्द्रलाई नेपाली सेनाका पूर्वजवान ज्ञानबहादुर रोकायाले खड्काकहाँ पठाएका थिए । अहिले उनै भविन्द्रले चितवन, भक्तपुर, पोखरा र काठमाडौँमा चार बालबालिका पठाएको गाउँपालिकाको विवरणमा देखिएको छ । भविन्द्रले चितवनका पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्यामजी अतिथिलाई पनि एक बालक पठाइदिएका छन् । भविन्द्रले नै गौमूल–५ का दलबहादुर रोकाया र बुदी रोकायाका १३ वर्षीय छोरा महेशलाई दुई वर्ष अगाडि श्यामजीकहाँ काम गर्न पठाएका थिए ।
गाउँपालिकाको विवरण अनुसार गौमूलका व्यापारीत्रय पुने धामी, अर्जुन धामी र पूर्ण धामी पनि बालबालिका सप्लाइ गर्नेमा पर्छन् । अर्जुन धामीले कैलालीका पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दराज पन्थको घरमा काम गर्न गौमूलबाट शिव धामीलाई पठाइदिएका छन् । धामी अहिले पनि पन्थको घरमा घरायसी काम गर्छन् ।
यसबारे बुझ्न पूर्व जिशिअ पन्थलाई फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । नन्दराजकी बुहारीले फोनमा भनिन्, “शिवले बालबच्चा हेर्ने काम गर्छ ।” शिवबारे थप प्रश्न गर्न थालेपछि नन्दराजका छोरा गजेन्द्रले फोन खोसेर भने, “तपाईं को हो, किन चाहियो ? मैले मेरो नाताका आधारमा उसलाई ल्याएको हुँ, उसको परिवार अप्ठ्यारोमा परेकाले सहयोग गरेको हो ।”
गाउँपालिकाले तयार पारेको विवरण अनुसार धनगढीकी व्यापारी दुर्गा सिंह, नेपाली सेनाका भूतपूर्व जवान तथा मानाकोटका स्थानीय ज्ञानेन्द्र रोकाया पनि बालबच्चा साहूकोमा पठाउने बिचौलिया हुन् । यतिसम्म कि गौमूल गाउँपालिकाका कार्यालय सहयोगी रामबहादुर रोकाया पनि यो काममा संलग्न भएको गाउँपालिकाको विवरणबाट देखिन्छ ।
यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बाजुरा शाखाका सुरक्षा गार्ड प्रेमराज जोशी, स्थानीय खडक रोकाया, सौरे रोकाया, शंकर रोकाया, राम रोकाया, दिनेश रोकाया, सविना रोकायाले पनि बालबच्चा पठाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको विवरणबाट देखिन्छ । हुँदाहुँदा छिमेकी जिल्ला बझाङका अरुण सिंह पनि यो कार्यमा संलग्न रहेको देखाउँछ विवरणले ।
गाउँका गरिब परिवारका बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारेर काम गर्न पठाउने अर्का व्यक्ति हुन्, बलराम जोशी । उनी गौमूल गाउँपालिकाको दुर्गाली प्राविका शिक्षक हुन् । उनले मानाकोटका टंकप्रसाद जोशीका छोरा युवराजलाई भूतपूर्व सैनिक सुरनसिंह बोगटीको ललितपुरस्थित घरमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाएका छन् । बलराम टंकप्रसादका नातेदारसमेत हुन् ।
बालश्रम ऐन, २०५६ ले १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई काममा लगाउन रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ४ मा ‘कसैले पनि बालकलाई ललाइ–फकाइ झुक्याएर वा प्रलोभनमा पारेर वा डर, त्रास वा दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले काममा लगाउनु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यदि यसो गरेमा ‘निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।
कैलाली धनगढीस्थित शारदा माविकी शिक्षक शान्ति सिंहले बाजुरा गौमूलका सरोज धामीलाई आफ्नो घरमा राखेकी छन् । उनलाई घरेलु श्रमिकका रूपमा राखेको स्वीकार गर्दै सिंहले भनिन्, “घरमा सहयोग गर्ने मान्छे नभएकाले ल्याएकी हुँ ।”
लामो समय गुपचुप रहेको गौमूलको यो घटना केही महिनादेखि मात्रै बाहिर आउन थालेको हो । २४ असोज ०७४ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै बाजुराबाट ‘बालबालिकालाई राम्रो विद्यालयमा पढाइदिने र राम्रो काममा लगाइदिने भन्ने सपना देखाएर जिल्ला बाहिर लगी घरेलु मजदुरका रूपमा काम लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको’मा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । बाजुरास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले ७ पुस ०७४ मा ‘घरेलु कामदारका लागि जिल्ला बाहिर पठाएका बालबालिकालाई यथाशीघ्र फिर्ता ल्याउन’ गाउँपालिका र अभिभावकलाई पत्र लेखेको थियो ।
०७४ पुसयता गौमूल गाउँपालिकाका दुइटा वडाका नौ बालबालिका घर आएका छन् । अहिलेसम्मको सार्वजनिक विवरण अनुसार यो गाउँपालिकाका दुइटा वडाका मात्रै ४३ जना बालबालिका अझै पनि राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लामा घरेलु कामदार छन् । गाउँपालिकाका अनुसार वडा नम्बर–४ बाट २३ र वडा नम्बर–५ बाट २० जना अहिले पनि घरेलु श्रमिक छन् । गौमूलको गाउँ बाल संरक्षण समितिको विवरण अनुसार कामदार बनाइएका सबै बालबालिका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् ।
अहिले गाउँ बाल संरक्षण समितिले गौमूलको मानाकोट गाउँलाई बाल श्रममुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । घोषणा गर्नुपूर्व सबै बालबालिकालाई गाउँ फर्काइने गौमूल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए । बालबालिकामाथि श्रम शोषण गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याइने दाबी गरे । “कानुन विपरीत लगिएका बालबालिका तत्कालै फर्काउन प्रयास भइरहेको छ,” रोकायाले भने, “०७५ वैशाखसम्म सबैलाई फिर्ता ल्याउँछौँ ।”
पश्चिम नेपालका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्लामा १३ असार ०७० सम्म कमलरी प्रथा प्रचलनमा थियो । त्यहाँका जमिनदारले थारू समुदायका बालबालिकालाई कमलरी बनाएर राख्ने गर्थे । सरकारले ती जिल्लालाई ‘कमलरीमुक्त’ घोषणा गरेपछि अहिले पहाडी भेगबाट बालबालिका ल्याएर घरेलु कामदार बनाउन थालिएको छ । गौमूल गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र रोकायाले भने, “कमलरी प्रथा हटेपछि दुर्गम भेगका बालबालिकालाई घरेलु श्रमिक बनाउन थालिएको छ ।”
बाल कल्याण समिति बाजुराका संयोजक तथा प्रजिअ लुकबहादुर क्षत्रीले बालबालिका लगिएको बारे जानकारी नभएको बताए । क्षत्रीले भने, “यसरी प्रक्रिया पूरा नगरी लगिएका बालबालिका शोषणमा पर्ने गर्छन् भने खोज्न पनि कठिन हुने गर्छ । पढाउने आशा देखाएर अर्कै काममा लगाइएको भए मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाउनुपर्छ ।”
गौमूल–४ का वडा अध्यक्ष गणेशबहादुर रोकायाले अब बालबालिकालाई घरेलु कामदारका लागि लैजान नदिइने बताए । “अहिलेसम्म जे भयो भयो,” उनले भने, “अब अर्को आर्थिक वर्षदेखि यस्तो हुन दिन्नौँ, सबैलाई घर फर्काउँछौँ ।”
‘कहिलेकाहीँ स्कुल पठाउँथे’
बाजुरा गौमूल–४, मानाकोटकी धनी बुढाका १४ वर्षीय छोरा मुकेशलाई ०७१ मा एक सैन्य अधिकारीले लिएर गए । ललितपुर स्थायी घर भएका ती सैन्य अधिकारीले राजधानीमा राम्रो स्कुलमा पढाइदिने भनेर मुकेशलाई लगेका थिए । तर, उनले मुकेशलाई नियमित स्कुल पठाएनन् ।
“भर्ना त भएको थिएँ तर कहिलेकाहीँ मात्र स्कुल पठाउँथे,” मुकेशले भने, “सधैँ घरको काम गरेर बस्नुपथ्र्यो ।” ती सैनिक अधिकारीको घरमा काम गर्न नसकेर मुकेश ०७३ को दसैँमा ‘सामान किन्न जान्छु’ भनी भागेर घर पुगे । “राम्रो पढ्ला भनेर पठाएँ,” मुकेशकी आमा धनी बुढाले भनिन्, “पढ्न पाएन, दु:ख मात्र पाएछ ।” मुकेशले आफूलाई लिएर जाने सैनिक अधिकारीको नाम भने बताउन सकेनन् ।
गौमूलकै १६ वर्षीया सरिता जोशीलाई चार वर्षअगाडि उनका सानोबाबु बलराम जोशीले सहरमा राम्रो पढाइदिने भनेर गाउँबाट लगे । सरिताकी आमाले पनि छोरीलाई रोकिनन्, किनभने उनलाई लागेको थियो, सहरमा छोरीले राम्रो पढ्न पाउली, भविष्य राम्रो होला । तर, बलरामले सरितालाई बुटवलका शिक्षक कमल खनालकहाँ लगेर छाडिदिए । कमल बलरामका मिल्ने साथी थिए ।
जब सरिता कमलको घर पुगिन्, उनको नारकीय जीवन सुरु भयो । पढ्न पाइनन्, बस्तुभाउ हेर्ने र घाँसपात काट्ने काम गर्नुपर्‍यो । अत्याचार खप्न नसकेपछि सरिता ०७२ वैशाखमा भागेर घर फर्किन् । बलरामले पनि हामीसँग गल्ती स्वीकार गरे । उनले भने, “साथीले भनेपछि लगिदिएको थिएँ, उनीमाथि नराम्रो व्यवहार गरेछ ।” सरिताकी आमा कमला जोशीले भनिन्, “छोरीले अत्याचार सहनुपर्‍यो तर बोलिदिने कोही भएन ।” सरिता अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई गएकी छन् ।